Global Voices teny Malagasy » GV Connect: Resadresaka nifanaovana tamin’i Mamisoa Isabella · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Jolay 2019 4:06 GMT 1	 · Mpanoratra Anushe Noor Faheem. Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Mediam-bahoaka, vondrom-piarahamonina, Blaogim-Piarahamonina GV, Fankalazana, gv-connect
Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny GV-er tsirairay ny Global Voices, kanefa nampifandray ahy tamin'ny fomba hafa hahitana ny Global Voices ny GV Connect. Avy any Madagasikara, Afrika i Mamisoa Isabella, izay nanomboka nandray anjara tato amin'ny GV ny taona 2011 ary mandika teny sy manoratra amin'ny teny Frantsay sy Malagasy. Feno ny GV ny androm-piainany satria GV'er ihany koa ny vadiny, Jentilisa izay manao fanitsiana ny Lingua Malagasy. Mandany ny ankamaroan'ny fotoanany miaraka amin'ny zanany izy ary mianatra amin'ny maha-mpianatra lalàna azy ankoatra ny fiainana amin'ny Aterineto.
Raha niezaka nahafantatra momba ny GV teo amin'ny fiainany aho dia fantatro ny fomba nanovan'i GV ny fomba fijeriny izao tontolo izao! Hoy Mamisoa raha niresaka momba ny GV ;
Mampirehareha ny maha-mpikambana ato amin'ny GV sady traikefa nahafa-po indrindra ahy teo amin'ny fiainako satria nahafahako nifandray tamin'ny olona sisa sy nahatakarako ny maha-zava-dehibe ny fahalalaham-pitenenana! Nanampy ahy hahafantatra ny kolontsaina samihafa eran'izao tontolo izao izany ary nampahafantatra ahy tsy tapaka ny zava-misy tsy misy mpitatitra sy ireo tantara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao!
Amin'ny maha-vehivavy manambady manan-janaka roa [dimy amin'izao fotoana izao] azy, sarotra ho azy ny manome fotoana feno ho an'ny Global Voices saingy ny GV kosa no fialamboliny ary mahaliana azy rehefa mahita ny vadiny miasa amin'ny GV izy. Nilaza izy fa nanova ny fomba fijeriny an'izao tontolo izao ny GV ary vao mainka izy mavitrika kokoa amin'ny fanamafisana ny fitenin-drazany ankehitriny. Hoy izy;
Manampy ahy handroso lavidavitra hatrany izany (GV) sy hanohy ny fanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny fitenin-drazanay izay anisan'ny fiteny tandindonin-doza.
Tsy azony eritreretina ankehitriny ny androm-piainany tsy misy GV. Hoy izy raha nanontaniana hoe manao ahoana re ny fiainanao raha tsy misy ny GV;
Ny fiainana tsy misy GV: toy ny miaina tsy misy aterineto sy very tambajotra sosialy sarobidy sy ny vaovao manan-danja.
Sarotra ho an'ny mpikambana GV ny fiheverana ny fiainana tsy misy GV kanefa mahavariana ny fahafantarana fa niova ny fomba fahitan'ny vehivavy manambady iray izay sady mpianatra no renim-pianakaviana [manan-janaka dimy] izao tontolo izao ! Lasa manome aingam-panahy ny GV amin'ny fanohizana ny asa ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa miaraka amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahalalahana miteny tsy voasakan-tsisitanin'ny fiteny ho an'i Mamisoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/15/141474/